Author: Nilkis Moogugore
Shaqaalaha kale ee ka shaqeeya Garsoorka waxay hoos imanayaan xeerarka shaqaalaha Dawladda.
Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara 1. Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar. Arrimaha ku xusan faqradda laad ee qodobkan waxa ka reebban meelaha ama waqtiyada xeerku dastuurkka reebo mariddeeda ama degitaankeeda.
Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Guurtida. Waa in uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland oo dastuirka dawlad kale haysan, balse wuu noqon karaa qoxooti dal kale deggan. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Darnmaanad-qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowridda suuqa xorta ah.
Fadhiyada Golaha Wakiiladu waa kuwo furan, kuwo xidhana way noqon karaan; xeer hoosaad baana nidaaminaya.
Haddii aanu Goluhu fadhiyin, waxa waajib ah in oggolaanshaha tallaabada laga qaadayo xubinta laga helo Guddida Joogtada ah ee Golaha Wakiilada; Golahana waxa la soo hor-dhigayaa kal-fadhiga xiga. Kala-xadaynta ku tilmaaman faqradda 1aad ee qodobkan, waa inay noqoto mid suurta-gelisa isku filnaansho gobollada iyo degmooyinku ka gaadhaan dhinacyada adeegyada bulsho.
Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan. Qabashada xilka Madaxweynenimo marka ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin.
Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan. Guddida Culimada iyo Waajibaadka Guddida.
Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Smoaliland Guurtida. Maxamadaha ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda waxa nidaaminaya xeer gaar ah. Marka uu hawshii loo doortay u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo x. Guddoomlyaha degmadu, isagoo la tashaday wax garadka tuuladawaxa uu soo jeedinayaa guddida maamul ee tuullo, waxana ansixinaya Golaha Sharci dejinta ee degmada. Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday; 5. Maqal Ciyaarta feerka ee beri-samaadkii laga dheeli jiray Soomaaliya Ciyaarta feerka ee beri-samaadkii laga dheeli daetuurka Soomaaliya.
Xeerarka degdegga ah waxay yeelan doonaan awoodda xeerarka ka soo baxa Golayaasha Wakiilada iyo Guurtidawaxayna dhaqan gelayaan marka uu saxeexo Madaxweynuhu. Tirada Xubnaha Golaha Wakiilada ee xeer-hoosaadka Goluhu qeexo. Awoodda Garsoorka u Gaarka ah. Haddii uu ku dhaco xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday.
Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeya hay in uu ka qayb gab hawlaha siyaasadeed, dhaqaale, buisho 1 iyo hiddaha si waafaqsan xeerarka iyo Dastuurka.
Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Haddli loo baahdo hay’ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan. Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman. Dacwadda dembiga ah ee Iagu eedaynayo xubnaha Golayaasha waxa soo oogaya Xeer-ilaaliyaha Guud, ka bacdi marka Golaha xubintu ama xubnuhu ka tirsanaayeen ay maamuuska somalilad xayuubiyaan saddex dasstuurka laba ahaan tirada guud ee Golaha.
Masuuliyiinta Daxtuurka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood. Waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xallilo dariiq nabadeed iyo wada-hadal; waxay dhawraysaa jiritaanka soohdimaha dalalka kale.
In uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa Golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdegga ah iyada oo la raacayo Dastuurka.